Ukuphupha izinwele zikanokusho, ngokuvamile sikunikeza e lezithembiso abakhiqizi ehlukahlukene: amaphosta elikhanyayo, izimakethe okuthakazelisayo, enhle futhi stylish emaphaketheni - kahle, bengakholelwa zonke lokhu ubukhazikhazi? Futhi njalo uma uthenga omunye "ezinhle" izinwele imoto, ukubuyekezwa zazo liphendulile ikhanda, sithemba isimangaliso. Futhi ngokushesha. Kodwa ake sibone, yini esikukholelwayo nangalokho cha. Futhi yini okumelwe siyibheke lapho ekhetha imoto.
I amashampu zihlukile ukuphelela komunye nomunye?
Ukubona zonke ezihlukahlukene imikhiqizo izinwele ukunakekelwa ezitolo zethu, kungenzeka ukuba ulahleke. Ubuningi abakhiqizi, uthembisa ivolumu ngaphezulu, akhanye futhi impilo izinwele zakho, akuqinisekisi ukuthi uthenga i imoto kangcono izinwele. Isilinganiselwa of the brand athandwa kakhulu akuzona njalo kukhombisa izinga yabo izici.
Amashampu ingahluka enjongweni kanye nokusungulwa. Zonke ezinye ngeengaba (ngentengo, umakhi, emaphaketheni, njll) Ingabe kubaluleke yesibili kuphela ngokungaqondile kuthinte izinga.
Ukubunjwa yonke amashampu zihlukaniswe zibe:
- engokwemvelo ehlanganisa izithako zemvelo kuphela;
- amashampu ngaphandle sulfate kanye parabens kodwa namanje ethambile equkethe surfactant;
- mass emakethe.
Ngu aphoyintimenti amashampu yilezi:
- I-izinwele ukukhula,
- yezinhlobo ezahlukene ekhanda (izinwele oily, ezomile noma evamile)
- lokuba kubuyiselwe futhi uqinise (izinwele ziyaqothuka futhi yonakele)
- I-izinwele ezinemibala.
Ngu wodwana kuhlanganisa amashampu okhokhelwayo.
Shampoo, 100% ehlanganisa izingxenye organic, umphumela ozuzisayo kakhulu izinwele. izimali ezinjalo nje ephephile izinwele ekhanda, bakwazi futhi ugcine wena izinkinga eziningi (dandruff, emaphethelweni yokuhlukanisa, isikhumba overdried futhi izinwele, ukuphazamiseka nezindlala sebaceous, njll), Kodwa futhi banamathuba zinezithiyo ezithile.
- Small eshalofini yokuphila. Kusho ngaphandle nezivimbelakuvunda kungagcineki isikhathi esingaphezu kwenyanga. Abakwazi kwenziwe kuphela isicelo noma bebodwa.
- Kuye izingxenye, amashampu ezinjalo kungase kube nzima ugeze izinwele zakho ngenxa yokuntuleka izithako yesivini.
Uma uzimisele ukuthi ngezikhathi ezithile (njalo emavikini 1-2) ukunikeza isikhathi esiningi ukusesha izithako futhi udale imoto yakho siqu, ukuhlola ngokudla kancane izingxenye elisha, bese umphumela uyoba yini nje imoto kuhle izinwele oily noma ukuxazulula esihle kakhulu dandruff kanye imikhawulo okuhlukene. Sowuzoba ifomula umuntu ngokuphelele ephephile imikhiqizo isikhumba nezinwele olungenza izinwele zakho kahle ukuthi udinga (umthamo, akhanye, ubude).
Amashampu ngaphandle sulfate kanye parabens
Estheticians dermatologists wadala ukusiza noma ubani ofuna ukuba ukhethe imoto kangcono izinwele, ukukala, lapho isikhundla okuholela zivame elalihlala okuthiwa izindlela semi zemvelo, zingenalo compounds eziyingozi :. Sodium lauryl sulfate, parabens, i-DEA, njll Lezi amashampu okunzima ukubathola emashalofini evamile yethu izitolo kanye nezitolo ezinkulu. Abakwazi ithengwe noma eminyangweni ezikhethekile, noma oda nge-Internet.
abakhiqizi abaningi basekhaya nabamazwe angaphandle bekwi yokukhiqiza of amashampu, aqukethe ngaphandle izithako zemvelo nazo ezinye surfactants (ngaphandle ejenti asebenzayo) ukwakha Foam, nezivimbelakuvunda - ukwandisa eshalofini yokuphila, amakha kanye namakha. Nokho, lezi izinto musa ingozi the isikhumba sasekhanda nezinwele, ngoba non-enobuthi futhi, ngokuvamile, zenziwa okusekelwe izithako zemvelo.
Phakathi izinkampani ukuthi baye bayinqoba ukuqashelwa zomhlaba emkhakheni izinwele ukunakekelwa, ungabiza :. Avalon Aubrey Engokwemvelo, Yebo Ukuze, Natura Siberica, Logona, Organic Isitolo, njll Bonke Unezitifiketi ngamazwe eqinisekisa ukuphepha izinga imikhiqizo yayo. A ezihlukahlukene imigqa kuzovumela ukukhetha imoto, okuyinto kudingeka izinwele zakho. Ngokwesibonelo, imoto enhle nezinwele ezihlinzekwa Logona, futhi izingane brand ephelele Yebo Ukuze.
Bonke babe elithola abo kanye nebubi, kungase kudingeke uzame ezingaphezu kweyodwa ikhambi izinkampani ezahlukene ngaphambi kokuba uthole ncamashi yakhe. Yiqiniso, intengo imoto kancane ephakeme kunaleyo imikhiqizo mass-emakethe. Kodwa uma uqhathanisa amagama emikhiqizo ehlukahlukene edayiswa ezikhiqiza, isibonelo, a imoto kuhle izinwele oily, le ukubuyekezwa kwe bessulfatnyh brand zihlale ngcono kakhulu.
Shampoo isigaba mass-emakethe
IMisa emakethe - ngoba ekukhiqizweni kanye ezikhiqizelwa. Mayelana 90% azo zonke amashampu ezitolo zethu zifana nomunye ukwakheka kanye isinyathelo. Umehluko kuyo kungaba lokuhlushwa izithako kanye izinto esebenzayo, uma ikhona. Ngokuvamile, lapho sikhetha imoto kuhle izinwele, nabangane bangempela kanye nokukhangisa nendima ebalulekile kule nqubo. Bese siyaqaphela ukuthi yayenze iphutha elikhulu. Phela, ukukhangisa hhayi ukutshela njalo iqiniso, ihaba izimfanelo ezinhle umkhiqizo noma ukunciphisa okungekuhle. Futhi kwangathi imoto elafika intombi ukuba contraindicated in izinwele zakho.
Umsebenzi oyinhloko amashampu - Ukuhlanzeka (ukuqinisekisa nokuhlanzeka izinwele ekhanda). Futhi iningi lazo babhekane ngokuphumelelayo lo msebenzi. Uma ufuna ukwazi ukuthi imoto kuhle izinwele kungaba ululame (isibonelo, ukwelapha seborrhea), kungcono ukubhekana inkinga ethile ukuze wesikhumba.
Amanye amathiphu wokukhetha imoto
Uma uthenga imoto kuhle nezinwele ungenalo ikhono noma nini, ukukhetha amathuluzi esitolo kungcono ukucabangela amanye amathiphu cosmetologists dermatologists.
Isimiso esikhulu e kukhethwa imoto - singazilimazi. Ngakho-ke, kuyasiza ukuba ukwethembela brand kungase kutholakale kanye nemibono yomphakathi. Buza ikhasimende ukugcina lo mbuzo: "? Uyini imoto kuhle izinwele" Ukubuyekeza: "Line Clean". Futhi hhayi ngaphandle isizathu! Shampoo lokhu brand njalo has a isilinganiso esihle, ngoba imikhiqizo wale nkampani has a ukusebenza asezingeni elifanele.
Qiniseka ukuthi sinake imoto, okuyinto libhalwe ngemuva ibhodlela ngamagama amancane. Isimiso ngukuthi: eduze phezulu ohlwini isithako, ayanda lokuhlushwa yayo imoto. Uma omunye izithako ezinhlanu zokuqala zihlanganisa sodium lauryl sulfate, noma SLS, -paraben, DEA futhi formaldehyde, kufanele ukulahla lokhu imoto.
Ayikho Ukukhetha olunye kuzoya ngohlobo izinwele zakho. Ngakho, i-imoto ezinhle izinwele owomile kufanele ibe nezakhi ezondla umzimba, amafutha namaprotheni. Ngaphezu kwalokho, izinwele owomile kwenza ukunakekelwa okungalungile - ukusetshenziswa nsuku zonke izinwele ashisayo dryer, curling, njll Pity izinwele, zizokutshela kukhanya okunempilo .. Khetha imoto ochungechungeni ekhethekile. Ngokwesibonelo, kusukela Nivea "Ukulungisa Amaphrotheni". Ngokusho ilebula, inamaprotheni futhi amafutha yemvelo, yokumatisa ngaphakathi izinwele. Kodwa khumbula ukuthi uma uthenga okuhle imoto izinwele owomile, imicabango yabantu ngaye lungase lungahambisani nalolo umbono wakho.
Ungathengi amashampu ukuthi ayifanele ukuthi isikhumba sakho, njengokungathi abazange likhanga!
A imoto kuhle izinwele oily: Izibuyekezo
Ukraine, ngokusho izibalo, indlela ethandwayo izinwele ukunakekelwa kusuka brand bagqugquzela. Thenga Daily Conditioner akulula, njengoba nesidingo lincane kakhulu. Futhi akumangalisi ukuthi ukufuneka enkulu lapha amashampu izinwele oily, ngoba i-sodium lauryl sulfate nge ukuvezwa kwesikhathi eside ekhanda iphula nezindlala sebaceous, senze oiliness anda. Izinwele kufanele wageza njalo.
Ngakho-ke, imoto enhle izinwele oily akufanele ibe SLS. Lena into esemqoka. Futhi kakhulu bathi beauticians emhlabeni wonke. Kodwa lalela, ngasizathu simbe, abambalwa kuphela.
Yiqiniso, ngemva kwesikhathi izindlela ezivamile lauryl ngesonto lokuqala ashintshele imoto zemvelo intando lithathelwe. Ungalindeli Imiphumela esheshayo: umzimba kudingeka balahle ngemiphumela futhi ukusungula ube usebenza umsebenzi ovamile. Futhi umsebenzi nezindlala sebaceous liyobuyiselwa kuphela emva ukusetshenziswa eside Daily Conditioner.
Ngokuqondene nezinye izithako, akufanele singayinaki izakhi: amavithamini, ezikhishwe amakhambi nama izithako elwa namagciwane ukusiza izinwele ukuhlala isikhathi esijana ahlanzekile.
Indlela ukukhetha imoto kuhle izinwele ivolumu?
Uphenyo cosmetologists mayelana amashampu ezinikeza izinwele eliphakeme nakakhulu, athé ukwehluka nomunye. Futhi zonke ngoba inkinga ngokwawo ngempela eziyinkimbinkimbi. Iningi labantu lintula ivolumu izinwele elincanyana. Kodwa lokhu kungenziwa combated? Yokuqinisa ukuqinisa futhi!
Ukuze wenze lokhu, ochwepheshe abaningi batusa lokhu:
- ukusebenzisa buso esikhethekile izinwele. Bona zingathengwa neminyango yezimonyo, noma ukwenze ngokwakho. Phakathi ethandwa kakhulu "ekhaya" kusho ngokuthi uju, i-cognac, uwoyela umsedari, yogurt, amaqanda isikhuphasha;
- wagcoba singene isikhumba sasekhanda nezinwele amavithamini, okungukuthi, 5, A, C;
- ukusebenzisa amathuluzi professional izinwele ukunakekelwa;
- esiphezulu ukuvikela izinwele kusukela nomthelela omubi: izinwele ashisayo dryers, stylers, nezizenze, elangeni eliza ngqo, amanzi kampompi ukuxova umuthi wokugoma echibini, nokunye.
Ukusebenzisa namafutha inkinga izinwele elincanyana has a action ezimbili. Ngakolunye uhlangothi kuba izinwele libe nzima ngokwengeziwe, ukunciphisa ivolumu. Ngakolunye - ke kusiza ecwaninga, ekunciphiseni fragility. Ukuxazulula lenkinga, ukusebenzisa namafutha kuphela izinwele, awukwazi wasibeka phezu izimpande.
Kubalulekile futhi ukuze kuqinisekiswe ukuthi kuhlale njalo ngaphakathi izinwele amavithamini namaminerali. Ukudla okunomsoco kanye ezikhethiwe Vitamin izakhiwo kungaba kakhulu ukushintsha isimo izinwele.
Amashampu ukuthi ingasheshi nezinwele
Kuyaqondakala ukuthi eliphezulu amashampu, izinwele ukukhula abagqugquzeli futhi amashampu ngokumelene nezinwele ngokuvamile zihambisana nomunye. Lo mqeqeshi owake wapheka kufanele "vuka" ashukumise izinwele follicle. Okwesibili - ukuqinisa. I imoto okuholela abakwazi kuphela sivuse ama, kodwa futhi ukunikeza ngayo nezakhi esiphezulu zokuthola. Ngeshwa, indlela abaphumelela ngempela abasakwazi eqolo futhi ezingavamile. Futhi ngokuhlala amashampu lesizinda komphakathi kungasiza kuphela uma umsebenzi "placebo umphumela."
Uma inkinga nezinwele ukhona ngempela, kuwumphumela of semfene sína emzimbeni. Ngakho-ke, ukuxazulula inkinga ngosizo imoto eyodwa kuphela kunzima kakhulu. Okokuqala udinga ukuthola ukuthi kubangelwa yini. Lokhu kungaba:
- eziningi ukucindezeleka,
- hormone ukwehluleka,
- nokungondleki kahle nokudla,
Njengoba ubona, the imoto kungaba ngokungaqondile kuphela kuthinte nokuqedwa inkinga. Zinakekele futhi impilo yakho, futhi izinwele nokubuyiselwa kuyoba isiqinisekiso ngokunemba izenzo zakho.
wochwepheshe Professional futhi bezinwele elisetshenziswa beauty salon. Lezi amashampu zihluke ngokuphelele olimini mass emakethe lokuhlushwa anda ezisebenzayo. Phela, ithonya lazo kumele ubonakale ngokushesha: Ukuthatha salon kanye owendlala isamba ohlanzekile inqubo, amakhasimende uzoluthola yalokho.
Ngamanye amazwi, izitolo ithengiswe okufushane lwenkomo olufakwe amanzi professional izinwele izimonyo. Ngakho, uma unquma ukuthenga imoto kuhle izinwele stylists Izibuyekezo akuzona ukwaziswa okuwusizo kakhulu. Umgomo wabo - inzuzo. Izibuyekezo okunjalo kuyoba isenzo esiwusizo, uma uthola imoto onguchwepheshe ukusetshenziswa ngezikhathi ezithile. Kungakhathaliseki ukuyisebenzisa nsuku zonke nokuthi ingabe uyafisa yini ukuthi bakhokhe? Moot. Okuwukuphela kwendlela lapho imoto professional ewusizo ngempela - kuba uyabanakekela izinwele ezinemibala. amashampu Special kakhulu ukudlulisa isikhathi lapho izinwele zakho uyobheka ephelele, ngenxa okuqukethwe lo mbala Umbala. Kodwa ikhambi inkinga nezinwele noma amashampu dandruff abakwazi.
Eminye imikhiqizo professional igxile Ukuvikelwa izinwele kusukela emisebeni ultraviolet noma ukuchayeka amanzi anosawoti. Kwezinye izimo (isibonelo, ngesikhathi iholide kuleli zwe nge elangeni elishisayo) ukusetshenziswa yabo kuyadingeka.
Khetha amathuluzi kusukela dandruff kuyadingeka, kuye ngokuthi izimbangela zalo, ngoba kungaba sengathi inkinga evamile yezimonyo okubangelwa ngokushintsha isimo sezulu noma imoto, futhi ngenxa isifo sesikhumba.
Dandruff ngeke usizo ukuqeda imoto kuhle izinwele, okuyinto libuyekeza futhi ushiye dermatologists kanye neziguli. Uma ungaqiniseki imbangela dandruff, kungcono ubonane onguchwepheshe, kungenjalo ungakwazi kuphela isimo sibe sibi kakhulu.
amashampu medicated kanye nezinye izindlela dandruff ingahluka kuye isimiso yokusebenza:
- elwa namagciwane,
Ngezinye izikhathi kwanele kwezimali, futhi kwezinye izimo, inhlanganisela. Hlale ukhumbula lokhu lapho ukhetha ikhemisi noma umnyango esitolo ekhethekile ezinye imoto kuhle izinwele. Impendulo evela kweminye abathengi kulokhu kuyoba kukusize kangako.
Elwa namagciwane kanye amashampu antifungal ukuvimbela ukusabalala nezilwanyana ezincane ukuthi kungabangela ukulunywa, ukucasuka nokuxebuka isikhumba izinhlayiya. Kuze kube yimanje, ukuqanjwa kwawo sengezwe ketoconazole, oktopriroks ne-zinc pyrithione.
Exfoliating imoto limelela khuhla sezinwele. Ngobumnene futhi ngokucophelela kususa amangqamuzana afile ngu uyaxebuka zamakhemikhali. Ukwakheka lokhu imoto ngokuvamile iqukethe isibabule salicylic acid.
izimali izakhi kufanele okukhazimulisa ubuso wacasuka khona yokuhlanganisa nokuthuthukisa ukukhula amangqamuzana enempilo ezikhishwe herbal yomsizi netiyela.
amashampu Muhle Ezinye brand zinanesilinganiso elincane izithako okwelapha. Ngokwesibonelo, e-imoto kusuka dandruff Nivea kuhlanganisa climbazole, Inhloko-n-emahlombe - zinc pripition njll Kodwa ngezimpawu ezinjalo ezazisetshenziswa dandruff ingasetshenziswa kuphela emva ukwelashwa okuphelele eziyinkimbinkimbi noma uma sibi lesi sifo.
Ngakho, ngokukhetha imoto e ekhemisi, noma izimonyo inthanethi esitolo, silitadisha ngokucophelela ilebula. Zama ukuthola kusengaphambili lonke ulwazi olufanele mayelana brand ukuthi ufuna ukunikeza ntandokazi. Thatha imali izinwele zakho uhlobo ukwethemba kuphela imizwa yabo futhi sisebenzisa iseluleko sakhe ochwepheshe, kunokuba ukukhangisa ezimibalabala.
ILabour Market Monitoring. Kanjani hhayi ukudayisa abo omsebenzi amanani aphansi kakhulu?